लक्ष्मण सुनार| Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
नेपालमा घुस खोर नीति तिब्र गतिमा मौलाउँदै गएको छ । नागरिकले तिरेको करले तलब खाने र तिनै नागरिकको काम गरे बाफत घुस लिने यो कस्तो नीति हो सरकार ? के यस्ता कर्मचारीले देशलाई विकासको गतिमा लैजाला र ? एक पल्ट गम्भीर भएर सोचौ त, कडा कारबार्ही होस् घुस्यहाहरूलाई । ताकी अरूले पनि यस्तो कम गर्न नसकुन ।